HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo loo gacan galiyay Heshiis ay kula wareegi karto Pau Torres
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay kula soo wareegi karto xidiga Villarreal ee Pau Torres wax ka yar qandaraaskiisa lagu burburin karo € 65m (£ 56m) xagaagan.
Iyadoo Ole Gunnar Solskjaer loo maleynayo inuu raadinayo lamaane muddo dheer ah ka dhinac ciyaara Harry Maguire , Torres ayaa lagu soo waramayaa inuu ka mid yahay lixda magac ee ku jira liiska daafacyada Red Devils xagaaga.
Iyadoo ninka Villarreal uu qandaraas kula jiray kooxda ilaa 2024, kooxda Unai Emery ayaa awood u leh inay la ciyaarto kubad adag oo lacag ah, laakiin United ayaa laga yaabaa inay heshiis la gaarto qiimo ka hooseeya sida lagu sheegay qandaraaskiisa.
Sida laga soo xigtay ESPN , Villarreal waxay ku farxi doontaa inay ku hesho Torres lacag ku dhow € 50m (£ 43m), madaama ay aqbaleen inuu doonayo inuu u dhaqaaqo mustaqbalkiisa ciyaareed isla markaana uu ku biiro koox hogaamineysa Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa intaas ku dareysa in United ay ku qasban tahay inay ka weecato xiisaha Real Madrid si ay u hesho saxiixa Torres, inkastoo rajada laga qabo qiimo dhimis ay ku qancin karto Red Devils inay xoojiso raacdada ay ugu jirto 24 jirkaan, kaasoo ah bartilmaameedkooda koowaad ee difaaca.
Torres ayaa 34 kulan u saftay Villarreal tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, isagoo shabaqa soo taabtay labo jeer La Liga iyo hal kulan oo Europa League ah.